Textile & Garment Accessories
Fashion Design & Services
Items 1 to 16 of 273 total
မေလွန်းရတီချိတ်လေးကတော့ အမြင်ဆန်းသစ်လှပပြီး ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ လှပသော ချိတ်အမျိုးစားလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတိုင်း အကြိုက်တွေ့စေမည့် ချိတ်ထည်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မေလွန်းရတီချိတ်ကို ဝတ်ဆင်လိုက်သူကတော့ မြင်သူတကားအားကျ ဝတ်ချင်လာစိတ်ဖြစ်အောင် စွဲဆောင်မူပေးနိုင်သော ချိတ်ထည်လေးဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
4 Pieces Double Fitted Sheet with Quilt Cover
4 Pieces Double Fitted Sheet with Quilt Cover - နှစ်ယောက်အိပ်မွေ့ယာအတွက် မျှော့ကြိုးပါသော အိပ်ယာခင်းဖြစ်ပါသည်။ - Standard Size ဖြစ်သော အလျား ၆ ပေ အနံ ၆ပေခွဲ ထု ၁၀လက်မ ရှိသောမည်သည့် မွေ့ယာတွင်မဆို အိပ်ယာခင်းကို စွပ်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ - Standard Size ဖြစ်သော ၇၈လက်မ ၉၀လက်မ ရှိသော စောင်စွပ်ပါဝင်ပါသည်။ - ပစ္စည်းအရေအတွက် ၄ ခုပါဝင်ပါသည်။ ပါဝင်သော ပစ္စည်းအချက်အလက်များ - မျှော့ကြိုးပါအိပ်ယာခင်း …….……....၁ ခု ( ၆ပေ ၆ပေခွဲ ထု ၁၀လက်မ ) - Standard Size စောင်စွပ်………..…၁ ခု ( ၇၈ လက်မ ၉၀ လက်မ ) - Standard Size ခေါင်းအုံးစွပ် ……….၂ ခု (၁၈ လက်မ ၂၈ လက်မ ) အရည်အသွေး - ၁၀၀ ရာနှုန်း ချည်သားစစ်စစ် စောင်စွပ်နှင့် အိပ်ယာခင်းဖြစ်ပါသည်။ - တာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဥတုရာသီနှင့်လည်း လိုက်ဖက်လျော်ညီပါသည်။ - ရိုးရှင်းပြီး ခောတ်မှီသော ဒီဇိုင်းများဖြစ်ပါသည်။ - နူးညံ့၍ အရောင်အသွေးစုံလင်ပြီး အလွယ်တကူ သယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ - လျော်ဖွတ်သန့်စင်ရာတွင်လည်း အရောင်များပျံ့လွင့်ခြင်း အလျဉ်းမရှိပါ။4Pieces Double Fitted Sheet with Quilt Cover - A Double Fitted Bed Sheet isasheet with ends that are elasticated and shaped to fit tightly overamattress of Double bed for two adults. - Fitted Sheet............................1pcs …....6’ x 6.5’ x 10” (186 x 200 x 28) cm - Standard quilt Cover................1pcs ……78” x 90” (200 x 230) cm - Standard Pillow Cases..............2pcs ……18” x 28” (48 x 74)cm Quality - 100% Cotton Bedding Sheet Sets, machine washable Lustrous, Long Lasting environment friendly and match with climate. - Both simple and fashionable design. - Bedding Set is colorful bedding and softening, well ventilated and easy care. - The color of the fabric will not change although you clean. Instructions - Cool Wash, Do not Bleach, Warm Iron, Machine Wash. - Do not tumble dry, Do not dry-Clean.
ငွေမှင်ပန်းချီချိတ်လေးကတော့ ဝတ်ဆင်သူတိုင်း ရိုးမသွားတဲ့ ချိတ်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းပိုးပေါ်မှာ ထိုးထားသော မြန်မာချိတ် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုဆန်ဆန် အရောင်နုလေးတွေပေါ်မှာ ချည်ကျစ်ကျစ် အရည်အသွေးမြင့်မြင့် ထိုးထားတဲ့ ချိတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းဆန်းပြီး လှပသောကြောင့် မိန်းကလေးတိုင်း အကြိုက်တွေစေသော ငွေမှင်ပန်းချီချိတ် ပိုးထည်လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပေါ်ဦး (ပိုးထည်၊ချည်ထည်) လက်လီ၊လက္ကားဖြန့်ချီရေးမှ ရောင်းအားကောင်းနေသော အူဝဲချိတ် နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်လည်းနီးကပ်လာပြီဆိုတော့ အလှူပွဲ လမ်းသဘင်များအတွက် ဝတ်ဆင်ဖို့ရန် ဝတ်စုံလေးလိုအပ်လာပြီလေ။ ကာလာလိုင်း (၁၀)ရောင်လိုင်းရရှိနိုင်သော အူဝဲချိတ်ထိုင်းပိုးထည်က ပွဲလမ်းသဘင်များအတွက် သင့်တော်သော ဝတ်စုံတစ်ခု ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်လို့ ဝယ်ယူအားချင်လျင် ပေါ်ဦး (ပိုးထည်၊ချည်ထည်)တွင် လက်လီ၊လက္ကား တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှာ ယူရရှိနိုင်ပါတယ်နော်။
ဇင်းမယ်ချိတ်အသစ်လေးနှင့် ဝယ်ယူအားပေးကြသော မိတ်ဟောင်း၊ မိတ်သစ် Customer များကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်ပြီး ဝတ်ဆင်သော မြန်မာအမျိုးသမီးများအတွက် စိတ်တိုင်းကျ ချိတ်ထည်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၁၀ကျော်သက် မိန်းကလေးတိုင်း အကြိုက်တွေ့စေသော ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး မြင်နေရသူများ ရိုးမသွားအောင် လှပနေသော ချိတ်ပိုးထည်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ… ပေါ်ဦး (ပိုးထည်၊ချည်ထည်) လက်လီ၊လက္ကားဖြန့်ချီရေးမှ ကြိုးကြီးရေစိုချိတ် ဒီဇိုင်း အသစ်စက်စက်လေး ကာလာစုံရပြီ ထွက်လာပါပြီနော်။Sample အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ထိုးပြီးမှ ၁လကျော် သေချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းလေးပါ။ ပွဲတက်ဖို့လည်း သင့်တော်သော ကြိုးကြီးရေစိုချိတ်ပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းပိုးပေါ်တွင် ထိုးထားသောကြောင့် ဝတ်ဆင်မူတိုင်း စိတ်ကျေနပ်မူကို ရရှိစေပါတယ်။ လက်လီ၊လက္ကားမှာယူလိုသော customer ပေါ်ဦး(ပိုးထည်၊ချည်ထည်)တွင် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ… ပေါ်ဦး (ပိုးထည်၊ချည်ထည်) လက်လီ၊လက္ကား ဖြန့်ချီရေးမှ ချိတ်ကိုမှ နှစ်သက်သော ကြိုးကြီး သုံးလိုင်းချိတ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ကာလာရောင်လည်း တောက်ပြီး အမြင်လန်းသော ကြိုးကြီး သုံးလိုင်းချိတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲလမ်းသဘင်အတွက် လည်း ပွဲတက်ဝတ်စုံအဖြင့် ဝတ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နော်။ ပိုးယုံ ပေါ်တွင် ထိုးထားသော ကြောင့် ဒီဇိုင်းလည်းမိုက်တဲ့ ကြိုးကြီးသုံးလိုင်းချိတ်ကို ပေါ်ဦး (ပိုးထည်၊ချည်ထည်)တွင် လက်လီ၊လက္ကား တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ… ပေါ်ဦး (ပိုးထည်၊ချည်ထည်) လက်လီ၊ လက္ကား ဖြန့်ချီရေးမှ ဒီဇိုင်းအသစ်ရောက် ရှိနေသော ထိုင်းပိုးကြိုးကြီးချိတ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းကောင်း အမြင်လန်းသော ကြိုးကြီးချိတ်က ပွဲတက်အခမ်းနားအတွက် လိုက်ဖက်သော ပွဲတက်ဝတ်စုံ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနူန်းလည်းသင့်တင့်လို့ လက်လီ၊လက္ကား ဝယ်ယူလိုသော လူကြီးမင်းများ ပေါ်ဦး (ပိုးထည်၊ချည်ထည်)တွင် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ချိတ်ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်သော လူကြီးမင်း စိတ်တိုင်းကျ ပေါ်ဦး(ပိုးထည်၊ချည်ထည်)တွင် တိုက်ရိုက်လာရောက် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ ဝယ်ယူအားပေးနေကြသော မိတ်ဟောင်း၊မိတ်သစ် customer များအားလုံးကို ပေါ်ဦး (ပိုးထည်၊ချည်ထည်)မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။